R & D ရေးအဖွဲ့ - တောင်ပိုင်း sparkling ဝတ်ဆင်နိုင်နည်းပညာ Co. , Ltd
အပူ Element ကို
R & D ကိုအလယ်ဗဟိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း, စက်မှု, အီလက်ထရောနစ်, ဆော့ဖ်ဝဲ, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
1. အဆိုပါဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကဖောက်သည်များ '' တောင်းဆိုမှုကိုသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသည်နှင့်အညီအဝတ်အစားစတိုင်လ်ဒီဇိုင်းနှင့်နမူနာရာတွင်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။
2.The စက်မှုအသင်း 3D ဖန်တီးမှုနှင့်မှိုဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။
3. အဆိုပါအီလက်ထရောနစ်အဖွဲ့ကဒစ်ဂျစ်တယ် circuit ကိုအထူးပြုသည် LF အတုဆားကစ်, HF (RF) တိုက်နယ်နဲ့ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်ဒီဇိုင်း။
4. software ကိုအသင်းသည် MCU / DSP embedded firmware ကိုအထူးပြု PC ကိုလျှောက်လွှာ, လျှောက်လွှာနှင့် IOS ကို / က Android application ကိုဒီဇိုင်းဖြတ်တောက်ထားသည်။
6. pm တွင်အသင်းအပေါငျးတို့သစီမံကိန်းကိုထိရောက်စွာအချိန်မီပြီးစီးနှင့်နိုင်ပါတယ်သေချာဖို့လူအင်အား, devices ကုန်ကျစရိတ် / ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။
R & D ကိုအလယ်ဗဟို 520 စတုရန်းမီတာရုံးနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။ : အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်ရာအရပျကောင်းတဲ့နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစုဆောင်းခြင်းအာရုံစိုက်ပါ။ 2018 ၏ 2nd ရာသီမကုန်မှီတိုင်အောင်, ငါတို့, 28 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်နဲ့4ပုံပန်းသဏ္ဌာန်မူပိုင်ခွင့် 18 တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ရရှိသော, Dongguan ၏ Dongguan နှင့်အသေးစား / အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်း၏သိပ္ပံ & နည်းပညာကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူ2သိပ္ပံစီမံကိန်းအတွက်သုတေသနပြည့်စုံ။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, ငါတို့ဆိုင်းငံ့များစွာသောအခြားသစ်ကိုတီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များနှင့် utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကြောင့်ထုတ်ကုန် R & D ကိုအလုပ်တစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးအလုပ်ဖြစ်ပြီး, R & D အတွက်စေ့စပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု matrix ကိုပုဂ္ဂိုလ်များခွဲဝေအသုံးပြုနေသည်, အချို့ဘုံအပေါ်အထူးပြုအလျားလိုက်အစီအစဉ်နှင့်အတူအသီးအသီးစီမံကိန်းအတွက်န်ထမ်းများကိုသတ်မှတ်နှင့်ဒေါင်လိုက်အစီအစဉ်နှင့်အတူအချို့သောဘာသာရပ်အပေါ်ဒေါင်လိုက်အခွက်တဆယ်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ အလျားလိုက်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်အဖြစ်အရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှာကောင်းသောသူတဦးတည်းတာဝန်ပေးခံရပါပြီ။ သူတို့ကနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်သူအများစုအတွေ့အကြုံရှိဖြစ်ကြသည်။ ဒေါင်လိုက်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အသိပညာ, တိကျခိုင်မာစွာသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအကျွမ်းတဝင်သူတဦးတည်းကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ကြသည်။
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - Featured ကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
12V အပူကားထိုင်ခုံကူရှင်, အပူဘောင်းဘီ, အပူအင်္ကျီ, အပူ Jacket, အပူ Pad , အပူအိတ်များအားပြန်သွင်းနိုင် များ,